🥇 ▷ Black Ops 4 & # 039; hadda waxay kuu oggolaaneysaa inaad u ciyaarto sidii zombie oo kale ✅
Black Ops 4 & # 039; hadda waxay kuu oggolaaneysaa inaad u ciyaarto sidii zombie oo kale
‘Wicitaanka Waajibaadka: Black Ops 4’ wuxuu u oggolaanayaa ciyaartoydu inay dhintaan oo ay dib ugu soo noqdaan zombies-ka qaabka cusub ee Blackout, laakiin nasiibdarro, xitaa tiro badan oo cayaartoyda zombie ah ayaa liita habkan waqtiga xaddidan.
Faafida ayaa timid usbuucii hore PlayStation 4 (Xbox One iyo PC waxay heli doonaan cusboonaysiinta bisha Ogosto 13), iyadoo la sii wado dhacdada “Apocalypse Z”. Qaabka waqtiga xaddidan wuxuu ku bilaabmayaa 80 ciyaartoy oo ku dhacay khariidadda Blackout qaab dhaqameedka ‘Battle Royale’, laakiin dhammaan kuwa dhinta waxay dib ugu soo baxaan sidii zombies leh nolol aan xadidneyn.
Zombies-ka ayaa dib uga soo cusboonaada dhulka iyadoo leh xoogaa faa’iidooyin ah oo kuwa nool aysan haysan tan iyo markii ay dhaqso u dhaqaaqaan, sare ayey u boodaan, arki karaan jawiga dhibbanayaashu khariidadda, raad-raacayaan tallaabooyinka badbaadayaasha, ku badbaadin karaan biyo-hoosaadka muddo dheer oo aan la dhibaatayn burburka dartiis. .
Si kastaba ha noqotee, zombies ma bogsiin karaan mana raadin karaan hub ama wax kale, laakiin waxay ku qalabaysan yihiin laba faas oo ka imanaya ‘Hell’s Retriever’, kaas oo ah hubka qaaska ah ee laga helo khariiddada zombie “Dhiigga Dhimashada”.
Zombies waxay ku soo noqdaan mawjadaha
Markii hore, zombies masiibada ayaa dib ugu soo noqnoqda hirar kasta 15 ilbiriqsi kasta, laakiin Treyarch wuxuu ku yareeyay waqtiga soo laabashada illaa 10 sekan. Isku soo wada duuboo, waxaa jira dhaawacyo fara badan dhamaadka ciyaarta, marka waxaa la filan karaa in zombies badan oo leh awood awood leh inay ku soo duulaan badbaadayaasha haray ugu yaraan qeyb ka mid waqtiga.
Nasiib darrose, koox zombie ah oo aan wali loo sheegan inay sheegatay guul baaxad weyn, sidaa darteed inkasta oo dhammaan faa’iidooyinka la helay, ahaanshaha qof liita weli wuxuu dareemayaa inuu yahay khasaaro weyn. Way u fududahay waarayaashu inay qabtaan tiro ton oo qalab ah iyo xero ay ku jiraan dhisme hub ah, qaasatan haddii ay leeyihiin xargaha iyo xarkaha Torque.
Zombies kaliya waxay helayaan labo faallood nolosha, mana ururin karaan nooc kasta oo waxyaabaha qarxa ee EMP ah ama bambaanooyin lagu burburiyo qufulka waarayaashu. Faashadii jahannamada waxay dhaawici kartaa jidadka, laakiin hal jab keliya ayaa jebin doonta faashadda. Kadib, markii la burburiyo aagagga gawaarida, zombies-yada ayaan hubaysnayn illaa ay ka dhintaan oo ay la soo noqdaan laba faas oo dheeri ah si ay u bilaabaan.
Waa geeddi-socod runtii jahwareer leh in la baabi’iyo cayaartoyda ku sugan buundada dhexdeeda ama meel sare oo leh dhibco aad u yar. Waxaa jira meelo badan oo ay adag tahay in la gaaro oo laga helo khariidadda Blackout, laakiin Hydro Dam iyo Fracking Tower runtii waa wareegyo cabsi badan oo zombies ah.